अन्तरिक्ष स्टेसन पृथ्वीमा खस्ला ? - प्रविधि - नेपाल
अन्तरिक्ष स्टेसन पृथ्वीमा खस्ला ?
सन् २०११ मा चीनले प्रक्षेपण गरेको अन्तरिक्ष स्टेसन तियानगङ–१ आउँदो अप्रिल २ तारिखसम्म पृथ्वीमा खस्ने निश्चित भएको छ । सन् १९७९ मा नासाको अन्तरिक्ष स्टेसन स्काइल्याब प्रक्षेपित भएको करिब ६ वर्षपछि अस्ट्रेलियाको पर्थ सहर वरपर खसेको थियो । तियानगङको भने खस्ने स्थान अहिलेसम्म निश्चित छैन । त्यसको अहिलेको झुकावको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने ४३ डिग्री उत्तरी गोलाद्र्ध र ४३ डिग्री दक्षिणी गोलाद्र्धका बीच खस्न सक्ने अनुमान वैज्ञानिकले गरेका छन् ।
तियानगङले करिब साढे ६ वर्ष अन्तरिक्षमा बितायो । ६ वर्षे अवधिमा यसले पृथ्वीका अनेकौँ क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका तथ्य संकलन गर्‍यो । खनिज स्रोत अवलोकन, पारिस्थितिकी पर्यावरण सर्वेक्षण, प्रदूषणको सूक्ष्म अध्ययन, प्राकृतिक विपत्तिको तथ्य संकलनमा यसको भूमिका अपरिहार्य रह्यो । सन् २०१३ मा चीनको युयाओ सहरमा गएको बाढीमा परेका मानिसको उद्धार पनि यसले संकलन गरेका तस्बिर हेरी गरियो ।
वायुमण्डलमा प्रवेश गरेलगत्तै तियानगङका अधिकांश भाग जल्दै जानेछन् । त्यसैले पूर्ण रूपमा यो पृथ्वीको सतहसम्म आइपुग्दा पनि यसले निम्त्याउने क्षति ठूलो नहुने अनुमान छ । त्यसमाथि पनि पृथ्वीको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग पानीले ढाकेको छ । त्यसैले जमिनमा कतै आएर अवतरण हुने सम्भावना सारै न्यून छ ।
अन्तरिक्षमा तियानगङको प्रक्षेपणलाई लिएर अमेरिका र रुस कुनै समयमा त्रसित थिए । यस घटनालाई चीनको सबैभन्दा ठूलो सफलताका रूपमा हेर्नेको जमात पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठूलै छ । तियानगङ प्रक्षेपण गरिँदा सिंगो चीनमै विजयोत्सव मनाइएको थियो । तियानगङ मासिएसँगै अन्तरिक्षका क्षेत्रमा चीनले कमाएको इज्जत पनि मासिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । तर, चीन यतिखेर सन् २०२० सम्म मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा केन्द्रित छ ।
सामाजिक संजालमा तियानगङको अवतरण साँच्चिकै नभई ‘अप्रिल फुल्स् प्य्राङ्क’ मात्रै हो कि भन्नेहरूको पनि कमी छैन । वास्तविकता थाहा पाउन अझै केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ ।